स्वास्थ्यमा हानी पुर्‍याउने साधारण आनीबानी यी हुन् - ज्ञानविज्ञान
बिबाह पछि कतिपय आनीबानी त्याग्नुपर्छ, जसले दाम्पत्य जीवनमा खटपट ल्याउँछ । के हुन् त ति आनीबानी ?
१. साथीहरुको आलोचना
श्रीमान र श्रीमती दुवैले एक-अर्काका साथीहरुको बारेमा अनावश्यक नकारात्मक टिप्पणी गर्नु हुँदैन ।
२. काम तोक्ने
कहिलेकाहीँ श्रीमान वा श्रीमतीले कुनै पनि कामलाई तेरो वा मेरो भन्दै पन्छाउने गरेको पाइन्छ । तर वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरिसकेपछि कुनै पनि काममा एक-अर्काको सहयोगी बन्न सक्नुपर्छ । अन्यथा असन्तुष्टीले डेरा जमाउन सक्छ ।
३. अनावश्यक अपेक्षा
कतिपयले पति वा पत्नीबाट बढी नै अपेक्षा गरेका हुन्छन् । हरेक कुरा आफुले सोचेजस्तै ठिकठाक हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा कसैमाथि गुनासो गर्नु सहि हुँदैन । यस्ता कुराहरु विस्तारै आफै परिस्कृत हुँदै र माझिदै जाने कुरा हो ।
४. विवाहको खर्च
परम्परागत तवरबाट हुने कुनै पनि बिहेमा धेरथोर खर्च भइहाल्छ । तर, विवाहमा भएको खर्चलाई लिएर दैनिक श्रीमान-श्रीमतीबीच छलफल र बहस हुनु राम्रो होइन । यसले सम्वन्धलाई राम्रो गर्दैन ।
बरु, यसबेला बढेको आर्थिक व्ययभारलाई परिपूर्ति गर्नका लागि दुबैको सहयोगी सहकार्य आवश्यक हुन्छ । बिवाहको बेला धेरै खर्च भएको हुन्छ, त्यसैले बिवाहपछि अनावश्यक सपिङ गर्ने, घुमफिर गर्ने जस्ता खर्च बढाउने काममा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
न श्रीमानले न श्रीमतीले एक-अर्कापट्टकिा नातेदारमाथि मजाक र व्यंग्य गर्नु शोभनीय हुन्छ । ठट्टाको रुपमा पनि यस्तो कुराहरु पाच्य हुँदैनन् । कतिले एकअर्काको आफन्त, इष्टमित्रको कुरा काट्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले दुबैको सम्बन्धलाई धरापमा पार्छ ।
६. पूर्वप्रेमीसँग तुलना
यस्तो त कदापी गर्नु हुँदैन । आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीलाई पूर्व प्रेमी-प्रेमिकासँग तुलना गर्न थालियो भने वैवाहिक जीवनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
Don't Miss it गिजामा समस्या भएकाहरुले ल्वाङ चिया पिउनुदा यस्ताे राहात
Up Next दुध कसरी पिउने हो ? यसलाई कतिबेला पिउदा फाइदा जान्नुहोस्
के तपाईको निन्द्रामा बोल्ने बानी छ ? त्यसो हो भने तपाईले यस्ता कुराहरुलाई आजैबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ
कतिपय मानिसहरु निदाइरहेको बला बडबडाउने हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरु निकै चिन्तित पनि हुने गर्छन् । यो समस्या लिएर डाक्टरकहाँ…
हड्डी के हो ? के रोग लाग्छ हड्डीमा ? यस्ता छन् लाग्ने रोगहरू
हड्डी के हो ? कुनै पनि प्राणी चलायमान हुन हड्डी अथवा त्यसको समग्र रुप अस्थिपञ्जर जरुरी हुन्छ। हाडले शरीरलाई एउटा…
नेपाल भरका घुम्न लायक ठाउँहरुको सूचि निकाल्यो सरकारले, हरेक नेपालीले राख्नु पर्ने सूचि
सरकारले देशभर पर्यटकीय गन्तव्य विस्तार गर्ने भन्दै एक सय गन्तव्य कार्यक्रममा गन्तव्यको सूची सार्वजनिक गरेको छ । पोस्टको अन्तिममा हामीले…
7 months ago mygyanbigyan
सामाजिक सन्देश बोकेर पनि हेर्न रमाइला हुने १० बलिउड चलचित्रहरु – यस मध्ये कुन हेर्नु भयो ?
सबै भन्दा पहिले बलिउड वा हिन्दी फिल्महरुको प्रचार भयो भन्ने नसोच्नुहोला । हामीलाई राम्रो प्रभाव पर्छन् भने जुन भाषाका वा…